Ị Pụrụ Jiri Paypal Ma Ọzọkwa straipu ọnụ na Clickfunnels - Foneelu Of The Day
Ị na-mwube gị web dabeere azụmahịa na ị chọrọ ka ndị mmadụ nwere nhọrọ iji kwụọ ụgwọ maka gị ọrụ.
The ozi ọma bụ na i nwere ike ebe ọ bụ na software na-akwado ọ dịkarịa ala 15 iche iche ịkwụ ụgwọ gateways.
agbakwụnye, Paypal ọ bụ a bit ihe mgbagwoju anya n'ihi na ị ga-mkpa ike a button na gị webpage na-arụ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ nke ntọala si na akaụntụ gị na n'ime foneelu kee kwa nke ga mezie gị akanyam.
straipu mwekota ya ụzọ mfe ebe ọ bụ na ị dị nnọọ mkpa ịmepụta otu mwekota njikọ gị Clickfunnels akaụntụ gị straipu na melite azụmahịa gị aha na ihe ikike usoro na ha abụọ.
Mgbe nke ahụ mechara, ị ga-eme ma gị ahịa ga-enwe a oke ka ị na-akpata ihe.